नवलपरासी सीमा नाकामा गो*ली चल्यो, सशस्त्र प्रहरीको गो’ली लागेर एक जनाको मृ’त्यु, सीमामा तना’वग्रस्त ! यस्तो छ कारण ( भिडियो हेर्नुहोस ) – Nepali in Australia
May 19, 2021 autherLeaveaComment on नवलपरासी सीमा नाकामा गो*ली चल्यो, सशस्त्र प्रहरीको गो’ली लागेर एक जनाको मृ’त्यु, सीमामा तना’वग्रस्त ! यस्तो छ कारण ( भिडियो हेर्नुहोस )
नवलपरासी सीमा नाकामा गो*ली चल्यो, सशस्त्र प्रहरीको गो’ली लागेर एक जनाको मृ’त्यु, सीमामा तना’वग्रस्त ! ( भिडियो हेर्नुहोस )
को’रोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न महँगो भएको छ । चिनी, खानेतेल, अण्डा, गेडागुडीलगायतका खाद्यवस्तुको भाउ बढेको हो । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा भाउ महँगो भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले पछिल्लो १०/१२ दिनयता चिनी, खानेतेल, गेडागुडीको भाउ महँगो भएको जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा थोकमै चिनी प्रतिकेजी १० रुपियाँसम्म महँगो भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिकेजी ८० रुपियाँ किनबेच भएको चिनी बढेर ९० रुपियाँ पुगेको छ ।
सो अवधिमा खाने तेल प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपियाँ बढेको छ । गेडागुडी पनि प्रतिकेजी १० रुपियाँ महँगो भएको छ भने कुखुराका अण्डाको प्रतिक्रेट ३० रुपियाँ बढेको सङ्घले जनाएको छ । “भाउ बढ्नुको कारण खोज्दा पाइँदैन । पैसा महँगो तिर्नुपरेको छ तर पैसा तिरेअनुसारको बिल पाइँदैन । साना खुद्रा व्यापारी जहिले पनि मर्कामा परेका छौँ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।